I-Ultrasonic Vanilla Extraction - Indlela Engeyona Efuthayo - I-Hielscher Ultrasound Technology
Ukukhishwa kwe-Vanilla yisisombululo se-flavour ekhishwe emigodini ye-vanilla kusisombululo se-ethanol namanzi.
Ukuze ukhiqize i-vanillin ephezulu njengephunga elimnandi, i-flavour kanye nephunga elimnandi, inqubo ephumelelayo, kodwa nesikhumba esincane imelwe ukuvimbela ukubola.
Isizinda se-ultrasonic yindlela encane yokwenza izimboni, okunikeza isivuno esikhulu se-vanillin esikhathini esincane kakhulu sokukhipha.
Ultrasonics High-Performance for High-Quality Vanillin Extracts
Njengoba i-spice yesibili ebiza kakhulu emva kwe-safari, ukukhiqizwa kwe-vanilla kudinga indlela ephumelelayo yokukhipha, okuvimbela ukuchithwa kwamafutha abalulekile. Isizinda se-Ultrasonic siyaziwa futhi sakhiwa njengendlela elula, engezona ezishisayo, kodwa ephumelelayo kakhulu yokukhulula izidakamizwa eziphilayo ezivela emthini wesitshalo. Isizinda se-ultrasonic sisekelwe esimweni se-cavitation ye-acoustic, okuyinto yokwelashwa okuyiyo kuphela. Lokhu kwenza i-sonication indlela ekhethwayo yokuhlukaniswa kwamakhemikhali e-bioactive avela njengama-flavour amakhemikhali namafutha abalulekile, isib. Vanillin, polyphenols, noma ama-antioxidants avela ku-botanicals.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Extraction Extraction
Ultrasonic Vanilla Extraction – ku-Batch noma Continuous Flow Mode
Ukucubungula ama-batches we-5 kuya ku-10L, sincoma UP400St (400W, pic ngakwesobunxele) nge-sonotrode S24d22L2D.
Ukucubungula ama-batches we-approx. 120L, sincoma I-UIP2000hdT (2kW, pic. Ikholomu kwesokudla phezulu) nge-sonotrode RS4d40L4.
Ngomsindo we-approx. 8L / iminithi, sincoma I-UIP4000hdT (4kW, pic. Ngakwesokudla) nge-sonotrode RS4d40L3 kanye ne-flow1 cell-cell FC130L4-3G0
Ucwaningo lwe-Case of Ultrasonic Vanilla Extraction
Jadhav et al. (2009) uma kuqhathaniswa isizinda se-ultrasonically-assisted (UAE) no-Soxhlet. Ucwaningo luqinisekisile ukuthi isizinda se-ultrasonic siqinisa ukukhululwa kwe-vanillin ngokuphawulekayo uma kuqhathaniswa nesisetshenziswa sikaSoxhlet. Ukwelashwa kweSoxhlet kudinga ukushisa okusebenzayo kwama-95 ° C, i-solvent: isilinganiso se-solute esingu-66.67ml / g kanye nesikhathi sokukhipha amahora angu-8 kuholele ekukhululweni. 180ppm vanillin. Isizinda esisiziwe nge-ultrasound (UAE) sidinga ukuhora oku-1 kuphela ukukhulula u-approx. 140ppm vanillin usebenzisa i-solvent efanayo: isilinganiso se-solute ekamelweni lokushisa.
Rasoamandrary et al. (2013) uma kuqhathaniswa ukusebenza kahle kwe-vanillin extraction usebenzisa i-ultrasicator ye-100W yocwaningo (isib UP100H), i-bathson ultrasonic, nokugeza okushisayo kwamanzi. Abacwaningi baphetha ngokuthi i-probe-hlobo i-ultrasonicator iyithuluzi elinamandla lokufakelwa ngenxa ye-high intensity ultrasonic. Ngakho-ke, i-probe-type ultrasonicator yashiya izindlela ezihlukile zokufakelwa ngokunikeza isivuno esifanayo / esiphezulu se-vanillin esithathwe isikhathi esincane kakhulu sokukhipha kanye nokusetshenziswa okuncane (okungukuthi i-ethanol).
Ukuqhathaniswa kwezindlela ezintathu zokufakelwa – probe ultrasonic, ukugeza ultrasonic, amanzi ashisayo ukugeza isizinda – wabonisa ukuthi ukuchithwa kwe-vanillin kwakungcono kakhulu kwe-probe-sonication besebenzisa i-ethanol engu-40% (v / v) ekushiseni okungama-30 ° C kanye nesikhathi sokukhipha amahora angu-1. Amanzi okugeza amanzi adinga ukuhlushwa kwe-ethanol (v / v) ka-50% ngo-56 ° C ngamahora angu-15.
I-UIP4000hdT – 4kW ultrasonic udokotela wezokwelapha eziqhubekayo.
Izinsiza ze-Ultrasonic ze-High Performance Extraction
Iphothifoliyo yomkhiqizo omkhulu kaHielscher isukela kuma-lab ultrasonicators amancane, anamandla ama-lab ultrasonicators amakhulu kuze kube ne-bench-top esebenzayo kanye nezinhlelo ezigcwele zezimboni, eziletha ukuphakama okukhulu kwe-ultrasound ukuze kusetshenziswe kahle futhi kuhlukaniswe izinto eziphilayo (isib. quercetin, i-caffeine, i-curcumin, Terpenes njll). Wonke amadivayisi we-ultrasonic avela 200W kuya 16,000W kufaka isibonisi ezinemibala yokulawula idijithali, ikhadi elihlanganisiwe le-SD lokuqopha okuzenzakalelayo kwedatha, ukulawula okukude kwesiphequluli kanye nezinye izici eziningi zomsebenzisi. I-sonotrodes namaseli okugeleza (izingxenye, ezithintana nephakathi) zingenziwa nge-autoclaved futhi kulula ukuzihlanza. Wonke ama-ultrasonicators ethu akhiwe ngomsebenzi we-24/7, adinga ukugcinwa okuphansi futhi kulula futhi ephephile ukusebenza.
Ukubonisa umbala wedijithali kuvumela ukulawulwa komsebenzisi-friendly we-ultrasonicator. Amasistimu ethu akwazi ukuletha kusuka phansi kuya kuma-amplitudes aphakeme kakhulu. Ukukhishwa kwe-polyphenols nezinye izakhi eziphilayo ezifana ne-vanillin, sinikeza nge-sonotrode ekhethekile ye-ultrasonic (eyaziwa ngokuthi i-ultrasonic probes noma izimpondo) ezilungiselelwe ukuhlukaniswa okunengqondo kwezinto eziphezulu ezisebenzayo. Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza komsebenzi we-24/7 emsebenzini obuthakathaka nasezindaweni ezinzima.
UJadhav D. et al. (2009): Ukukhipha i-vanillin emanzini ama-vanilla: Ucwaningo lokuqhathaniswa kwe-soxhlet evamile kanye ne-ultrasound eyisiza. Journal of Food Engineering 93, 2009: 421-426.
I-rasoamandrary N. et al. (2013): Isisombululo esithuthukisiwe se-Vanillin 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde kusuka kubhontshisi abavuthiwe abasebenzisa i-Ultrasound-Assisted Extraction: Ukuqhathaniswa kwe-Ultrasound-Assisted and Hot Water Bath Extraction.
I-Principle yokusebenza ye-Ultrasonic Extraction
Ukusetshenziswa kwamagagasi amakhulu e-ultrasound kuya emithonjeni yamanzi ephuma ku-cavitation. Isimo se-cavitation siholela endaweni ephakeme kakhulu ekushiseni okushisa, izingcindezi, izinga lokushisa / ukupholisa, ukuhluka kwezingcindezi kanye nemikhakha ephakeme ye-shear emaphakathi. Lapho ama-bubbles cavitation efakaza phezu kwamanzi amaningi (njengezinhlayiya, ama-cell plant, ama-tissue njll), ama-micro-jets kanye nokushayisana kwe-interparticlular kubangela imiphumela efana nokucubungula ubuso, ukuguguleka kwamanzi kanye nokuphazamiseka kwezinhlayiyana. Ukwengeza, implosion ye-bubble cavitation emithonjeni yamanzi idala ama-macro-turbulences kanye nokuxuba okuncane.
Umdwebo 1: Ukudalwa kwamabhulebhu azinzile nezikhathi ezincane.
(a) ukufuduka, (b) ukufaka isikhala esiphezulu, (c) ukuguquka okuqinile, (d) ukucindezelwa
[ishintshwe kusuka ku-Santos et al. 2009]
Isizinda se-ultrasonic siphumelela ukuhlukaniswa okusheshayo kakhulu kwamakhemikhali - ukuphelelwa yisikhathi kwezindlela ezivamile zokukhipha esikhathini sokucubungula isikhathi esifushane, isivuno esiphezulu, futhi emazingeni okushisa aphansi. Njengendlela yokwelashwa okunomsoco, i-ultrasound-eyisizinda esisizwa igweme ukuchithwa okushisayo kwezinsimbi eziphilayo kanye nokuqhathaniswa uma kuqhathaniswa namanye amasu afana nesakhiwo esiyingqayizivele se-solvent, i-hydrodistillation, noma I-Soxhlet isizinda, esaziwa ukubhubhisa ama-molecule ane-heat sensitive. Ngenxa yalezi zinzuzo, isizinda se-ultrasonic yindlela yokukhetha yokukhululwa kwama-bioactive okushisa okushisa okuvela kubhodini.
I-Vanilla ukunambitheka okulinganiselwe, okungakhishwa kuma-orchid ohlobo lweVanilla, ngokuyinhloko ezinhlotsheni zaseMexico, i-vanilla flat (le-V. planifolia). Izakhi ezihlanganiswe nokunambitheka kwe-vanilla orchid zitholakala ezithelo zaso, eziphuma ekungcoleni kwembali. La pods yembewu acishe abe ngu-1/3 x 6 inches, abebomvu ngombala onsundu uma mnyama. Ngaphakathi kwalawa podula kukhona uketshezi olunamafutha eligcwele imbewu emincane. Kokubili imbobo nembewu kusetshenziselwa ukwenziwa kwe-vanillin.
Nakuba i-vanillin yi-flavour oyinhloko ehlanganiswa nesitshalo se-vanilla, i-vanilla ehlanzekile ekhishwe iqukethe ama-compounds angamakhulu amaningana ama-flavour, abangela ukunambitheka kwayo okunzima, okujulile.
I-vanilla essence yenzeka ngezindlela ezimbili, okungukuthi i-vanillin yangempela ye-vanilla ephuma ku-vanilla seedpod kanye ne-vanillin eyenziwe nge-industrially. I-seedpod yangempela iyathathwa ingxube eyinkimbinkimbi yamakhemikhali angamakhulu amaningana ahlukene. I-vanillin yama-chemical compound – 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde – yiyona eyinhloko enkulu ekwenzeni ukunambitheka kanye nephunga elimnandi le-vanilla yangempela futhi yiyona ingxenye enkulu ye-flavor yezinyosi ze-vanilla eziphulukisiwe. Ngaphandle kwe-vanillin, kwangathi amanye amakhemikhali e-acetaldehyde, i-acetic acid, i-furfural, i-hexanoic acid, i-4-hydroxybenzaldehyde, i-eugenol, i-methyl cinnamate, kanye ne-asidi ye-isobutyric yenza i-aroma eyinkimbinkimbi enzima.
I-Bourbon vanilla noma i-Bourbon-Madagascar i-vanilla ikhiqizwa kusuka ku-V. planifolia izitshalo, ezikhula eziqhingini zase-Indian ezifana neMadagascar, iComoros neRéunion, okuthiwa yi-Île Bourbon. Isikhathi “I-vanilla ye-Bourbon” ichaza futhi iphunga elihlukile le-vanilla elivela ku-V. planifolia.
I-vanilla yaseMexico, etholakala ku-V. planifolia, iyakhiwa ngobuningi kakhulu. I-vanilla yaseMexico iyatiwa futhi idayiswa njenge-vanilla evela ezweni elivela kulo, njengoba isitshalo se-V. planifolia sizalwa eMesoamerica.
I-vanilla yesiTahiti ivela eFrench Polynesia, ikhiqizwa isitshalo se-V. tahitiensis. Ukuhlaziywa kwezakhi zofuzo kubonisa ukuthi lezi zinhlobo kungenzeka ukuthi ziyi-cultivar ezivela kwi-hybrid ye-V. planifolia ne-V. odorata.
I-vanilla yaseNtshonalanga yamaNdiya yenziwa ku-V. pompona, ekhulile eCaribbean naseCentral naseNingizimu Melika.